Ethiopia Vs Argagixiso: Daacish Oo Sheegtay Inay Itoobiya U Wareegayso - Jigjiga Online
HomeSomalidaEthiopia Vs Argagixiso: Daacish Oo Sheegtay Inay Itoobiya U Wareegayso
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Kooxda la baxday khilaafada islaamka ee Daacish ama ISIS ayaa qorshaynaysa inay hawlgallo ka fuliso amaba u wareegto waddanka Itoobiya, halkaas oo ay doonayso inay kaga faa’iidayso deggenaansho la’aanta gobollada qaarkood iyo furfurnaanta siyaasadeed ee dalka ka hana-qaadday.
Daacish daawasho ah oo soconayay saddex daqiiqadood oo ku baxay luuqadda afka Axmaariga ee lagaga hadlo Itoobiya ayaa waxa uu soo bandhigay qorshaha iyo xeeladaha ururka argagixisada ah ay ka damacsan yihiin dalka.
Muuqaalkan ayaa waxay khubarada ammaanku sheegeen inuu hordhac u yahay amaba si dahsoon ay ugu shaacinayso hawlgallo qorshaysan oo ay doonayso inay ka fuliso gudaha Itoobiya.
Waxa kale oo uu muuqaalku soo bandhigay nin ku hadlaya luuqadda Axmaariga oo sida laga fahmay dhalasho ahaan kasoo jeeda Itoobiya.
Ururka Daacish ayaa waxa uu farac ku leeyahay dalka Somaliya, gaar ahaan buuraha Galgala ee Puntland oo ay marar dhawr ah ka dagaallameen iyo Koonfurta shishe, gaar ahaan Muqdisho oo ay marar dhawr ah sheegteen inay hawlgallo ka fuliyeen.
Si kastaba ha ahaatee, Dawladda Deegaanka Soomaalida ayaa looga baahan yahay inay feejignaan dheeraad ah samayso, maadaama ay tahay xuduudka kaliya ee Daacish kasoo gudbi karto.